A yekugadzira midrash
Responsa > Category: Chidzidzo cheTalmudic > A yekugadzira midrash
EA Yakabvunzwa 7 months ago
Kana mharidzo ikagadzira halakhah itsva kubva pavhesi, kuenda kunzira yekuti inogadzira halakhah Dauriyta (iyo Ramban), vana veIzirairi vakaitei risati raburitsa halakhah iyi? Kungopfuudza mhosva yeDauriyta (pasina kuziva)? Somuenzaniso, vasati vakumbira kuti vadzidzi vakachenjera varemekedzwe ( halachah yakabva pakati pe "the"), vaizoitei? Vaisazoremekedzwa uye vangave vachipara mhosva yeDauriyta?
Zvirokwazvo. Dambudziko nderei? Chero bedzi vaisada mutemo uyu aisazikanwa nekudaro chero akafamba nawo akabatwa chibharo.
Asi kunyange zvakadaro hazvidikanwi kuti izvi zvose zvizvarwa zvakapfuura. Dzimwe nguva mutemo wakambodiwa kare, uye chete mharidzo yatinayo inyanzvi yakati.
EA Akapindura 7 months ago
Dambudziko nderekuti izvi hazvigoneke. Halacha Dauriyta tarisiro yakananga kuna Gd kubva kwatiri. Saka kana achitarisira chimwe chinhu kubva kwandiri zvinokwanisika kuti achandiudza, uye haamirire zvizvarwa zvakati kuti kusvikira mungwaru mumwechete auya otitsidzira zvinotarisirwa naMwari kwaari.
Tinotarisira kubva kwatiri*
Tirgits Akapindura 7 months ago
Pamwe muenzaniso weyekupedzisira sarudzo uri mune iyi link iripazasi. Zvinoreva kuti Rabbi Akiva vakada uye vakagadzira uye havana kutaura tsika yeSharaki kuti ndeipi nzvimbo yekutsoropodza kwaRabbi Tarpon, uye zvinoitika kuti Rabbi Akiva angangodaro akawana halakhah yakakanganwa.
(Handiyeuke kuti kupi uye mumamiriro ezvinhu api ndakaona kuti chitubu ichi chinounzwa. Kunyange zvazvo zvisiri pachena kuti Rabbi Akiva akawana tsika asi chete kuti tsika yacho haipokanise, asi zvingangoitika kuti kana Rabbi Tarpon akayeuka zvaanoita. akaona uye tsika yacho yakanga isina kufanana naRabhi Akiva ipapo Rabbi Tarpon)
Michi Akapindura 7 months ago
Hazvibviri kunyora zvese (ona Eruvin XNUMX nei mitemo yeDurban isina kunyorwa). Kupfuura izvozvo, mubvunzo wako uri pamusoro pemharidzo yacho. Sei Mwari vakasarudza kupa Tora naDeresh. Usaziva mafungiro ake.
Pamufungo wechipiri kubva kunobva mumabhuku ari pamusoro apa zvinoita sekunge ivo vaifungidzira kuti kunyangwe musiki aida haakwanise kupokana netsika, kureva kuti vaifungidzira kuti kunyangwe munguva yakapfuura vaiziva mharidzo dzekusika kana kuti vakarangarira mhedzisiro yavo (kunyanya chikamu chikuru). Saka mamiriro acho akange asina kudaira "Absolutely. Chero bedzi vasina kukumbira, nezvimwewo, ani nani aipfuura napo akabatwa chibharo ”kana kuti akazviona sekuchimbidza kukuru.
Hwamanda dzinoridzwa kubva kuDauriyta (kwezvizvarwa) pamberi peboka revanhu uye muhondo yemitzvah uye mune zvimwe zvibayiro zvavose (murenje XNUMX: XNUMX-XNUMX). Kubva muTorah paRosh Hashana (gore rega rega) uye paYom Kippur paYuval, shofa inoridzwa, uye muTemberi, hwamanda dzinowedzerwa kune shofar maererano nendima iri muMapisarema,
Mumabhuku eIbid. Rabbi Akiva vakakumbira mharidzo mundima dziri mugwenga rambotaurwa iyo inoridza zviri pamutemo mamwe mabasa uye vapristi vane hurema husina basa. Rabbi Tarpon anounza humbowo hunopesana neizvi kuti akaona babamunini vake Higer vakamira uye vachipembera nehwamanda. Rabbi Akiva anopindura kuti pamwe David wake akarovera kuputika kusingabvi muTorah (kana kuti kwete kubva paparsha yataurwa pamusoro apa mune mharidzo) asi paRosh Hashana kana Yom Kippur weYuval. Uye Rabbi Tarpon anoyeuka kuti akazviona, uye anoti: “Basa racho harisi ngano. Ropafadzai Abraham baba vedu kuti Akiva abuda muchiuno chako. Tarpon akaona uye akakanganwa, Akiva anoda zvake uye anobvumirana nemutemo. "Munhu wese anosiya kubva kwauri semudyandigere kubva muhupenyu hwake."
Rabbi Tarpon anoshamisika kuti Rabbi Akiva "akazvida uye akabvumirana nemutemo," zvichireva kuti Rabbi Akiva haana kuunza mharidzo yekuvimba asi chido chekugadzira. Mune mamwe mazwi, tinoona kuti Rabbi Tarpon akauyawo kuna Deresh Yotzer uye anotaura kuti hachisi chokwadi kuti munguva yakapfuura havana kuzvibata saiye.
Izvi zvinoreva kuti Rabbi Tarpon anofungidzira, uye mune ino Rabbi Akiva pamwe anobvumirana naye, kuti hazvigoneki (kana kuti hazvina musoro) kufunga kuti muchizvarwa chekare vaisaziva mitemo yakarurama muchokwadi. Ndiko kuti, pano zvinofungidzirwa kuti mhedziso dzese dzemharidzo dzekusika (kureva kuti mharidzo dzekusika pachadzo) dzaizivikanwa kare, asi dzakakanganwika, uye nhasi uno anoda mharidzo yekusika anofanira kufunga kuti ari kungoburitsa mharidzo yaive. yaimbozivikanwa uye ichiteverwa.
Kunyange zvazvo zvichibvira kuti tsika yacho haisi humbowo hwakakwana uye Rabbi Akiva aigona zvechokwadi kuregerera (zvishoma) kuti munguva yakapfuura havana kufunga nezvemharidzo iyi yakarurama kusvikira Rabbi Akiva akasimuka ndokukumbira.
Doron On VaRehavha isangano rerusaruraganda here? (chikamu 484)